Empira sasanida - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Sasanida)
Sarintanin'ny Empira sasanida tamin'ny taona 620 - 627.
Ny Sasanida dia fianakavia-mpanjaka persiana nanapaka tao amin'ny tontolo iraniana tamin'ny taona 224 hatramin'ny taona 651 nidiran'ny Miozolmàna tao. Izany vanimpotoana izany no andro volamena teo amin'io faritra io, na ara-javakanto izany na ara-politika na ara-pivavahana. Atao hoe Empira sasanida ny empira notapahin'ny mpanjaka sasanida.
Tamin'ny andron'ny Empira rômana sy ny Empira bizantina dia isan'ny empira natanjaka tao Azia Andrefana ny Empira sasanida nandritra ny efajato taona. I Ardasira I, izay nandresy an'i Artabàna IV mpanjaka partiana arsakida farany, no nanorina ny dinastia sasanida, ka tsy nifarana izany raha tsy tamin'ny faharesen'ny "mpanjakan'ny mpanjaka" (emperora) farany atao hoe Iazdgarda III (taona 632-651). Ity farany, taorian'ny efatra ambin'ny folo taona niadiana, dia tsy afaka nisakana ny fandrosoan'ny fakana tany nataon'ny kalifata arabo, izay empira silamo voalohany.
Ireto avy ireo faritra voafaoka tao anatin'ny tanin'ny Empira sasanida tamin'izany fotoana izany: ny faritra mahafaoka an'i Iràna sy i Iràka ary i Armenia ankehitriny, i Kaokazy atsimo (Transkaokazia), isan'izany i Dagestàna atsimo, i Azia Afovoany atsimo-andrefana, i Afganistàna andrefana ary ampahan-tanin'i Torkia (Anatolia) sy an'i Siria ankehitriny, ampahany amin'ny morontsiraky ny saikanosin'i Arabia, ny faritry ny Helodrano Persika ary apahany maro amin'i Pakistàna andrefana. Niantso ny empirany hoe Eranshahr, izay midika hoe "Empira iraniana" na "Empiran'ny Ariana" ny Sasanida.
Heverin'ny mpahay tantara ho vanimpotoana isan'ny manan-danja indrindra teo amin'ny tantaran'i Iràna ny andron'ny Sasanida. Amin'ny lafiny maro dia izany vanimpotoana izany no fahatanterahana fara tampon'ny sivilizasiona persiana, ary io no empira iraniana lehibe farany talohan'ny fakan-tany nataon'ny Miozolmàna tao Persia sy talohan'ny fandraisan'ny mponina tao ny fivavahana miozolmàna. Ny fiantraikan' ny kolontsain'ny Sasanida dia niely hatrany ivelan'ny tanin'ny empira, ka nahatratra an'i Eorôpa Andrefana, an'i Afrika, an'i Sina sy an'i India, sady nandray anjara teo amin'ny fiforonan'ny zavakanto eoropeana sy aziatika tamin'ny Andro Antenantenany. Ny faninteraky ny sivilizasiona islamika dia hita taratra nanomboka tamin'ny fakan'ny Moizolmàna an'i Iràna.
Fanjakan'ny Arsakida (247 tal. J.K - 224 taor. J.K.)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Empira_sasanida&oldid=979692"
Voaova farany tamin'ny 15 Janoary 2020 amin'ny 12:43 ity pejy ity.